Maxaad Kala Socotaa Lammaane Da’ Ah Oo Si Lama Filaan Ah Instagram Caan Uga Noqday? | Kaafi News
Maxaad Kala Socotaa Lammaane Da’ Ah Oo Si Lama Filaan Ah Instagram Caan Uga Noqday?
Hsu Hsiu oo 84 jir ah waxay sheegtay iney marnaba ku fikirin iyada oo ah da’da duqnimada ku jirta in sawirkeeda sidan loo xiiseyn doono.
Sida laba qof oo dhalinyara ah Hsu Hsiu iyada oo dhoolla caddeyneyso oo siyaaba kala duwan ayey sawrirra cajiib ah gashaa.
Waxayna lammaanuhu caan ku yihiin sawirro ku habboon xayasiiska goobaha dharka lagu maydho iyaga oo labbiskooduna yahay mid iska caadi ah.
Muddo 70 sana ah Maama Hsu Hsiu iyo Seygeeda Baaba Wan Ji waxay dhar ku meyri jireen doobbi ku yaalla magaalada Taiching. Iyaga ayaana iskaleh doobbigaasi ay dharka ku maydhaan.
Dad badan ayaa dharka ay u keeneen si looga meyro uga tagay doobbigooda. Haddaba wiil ay lammaanahaasi dhaleen oo lagu magacaabo Rif Chang wuxuu u soo jeediyey dharka ay dadku kaga tageen dobbiga iney sawirro ku galaan kaddibna ay Instagram dadka kula wadaagaan.
“Arrintaasi suurtagal ma aha ayey ku jawaabeen lammaanaha da’da ee doobbiilaha ah. Ma annaga oo da’da duqnimada ku jirno ayaan sida dhalinyaradi u dhaqannaa” ayey ugu jawaabeen.
Wiilki yaraa ayaa fikirkiisa ku adkeeyey waaliddiintiisa ugu dambeyntina fikirki wey la qaateen. Haddaba lammaanaha sidaa ku billaabay iney sawirradooda bartooda Instagram bulshada kula wadaagaan waxaa hadda ku xiran 130,000 oo qof. Waxayna noqdeen xiddigo caan ka ah Instagram.
Wiilkooda oo ka warramay fikirka ku dhashay “inuu ujeedkiisu ahayn waaliddintiisu Instagram iney sawiro soo dhigaan oo keli ah iney caan noqdaanna ma fileyn, balse waxaan ugu talagalay ayuu yiri iney waaliddiinteeyda ay ku caajis baxaan…”
Ujeeddada kale uu wiilka yar lahaa ayaa waxay ahayd dadka dharka ku illaaway doobbiga iney dharkooda arkaan kaddibna ay soo doontaan.
Haddaba, labada lammaane ee da’da ah marki ay si aad ah ugu soo caan baxeen Instagram, majallaadka waaweyn ee faashiinka kuwooda ugu caansan waxay billaabeen iney sawirro ka qaataan bogaggooda horana ay ku soo daabacaan.
Oday Wan Ji wuxuu sheegay marka aan surwaal gaab xirta oo dharka noocaasi aan ku labbisto inaan iisu arko inaan ahay dhalinyar ay da’diisu 30 jir tahay.
Wan Ji wuxuu dhar meyridda uu billaabay isaga oo 14 jir ah. Wuxuuna sheegay waagi hore iney dadku dharkooda doobbi ku illaawi jirin balse hadda maadaamaa uu dharku raqiis noqday ay ugu wacan tahay in dharka la illaawo ayuu yiri.
“Waan xusuustaa…anigu markaan xaaskeyga guursanayey si aan suud aan ku aroos galo u iibsado waxaan iibiyey gaari dameer buuxa oo bariis ah. Dharka markaa ayuu qiima lahaa” ayuu yiri.
Wan Ji wuxuu sheegay dadku sababta ay dharkooda doobbiga ugu illoobayaan ay tahay iney dadku taajir yihiin oo ay dharka ka maarmaan ama iney dadki dharkaasi lahaa dhinteen.
Labadan lammaane oo ay da’doodu aadka u weyn tahay oo gabbal dhac ku dhow waxay sheegeen iney sii wadayaan inta ay ka geeriyoonayaan iney sii wadayaan iney sawirro qurux badan ay taageerayaashooda Instagran la wadaagaan.